City Art: santarin’ny Tanàna art gallery ny ranty | NewsMada
Mitohy hatrany ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny vakoka amin’ireo orinasa vonona ny hampandroso ny tontolon’ny zavakanto. Iray amin’izany ny niforonan’ny hetsika City Art.
Vita omaly ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny La City, etsy Ivandry, sy ny minisiteran’ny Serasera sy ny vakoka, mikasika ny nanokanan’ity toeram-pivarotana lehibe ity faritra iray ho an’ny zavakanto sy ny hitantanan’ny minisitera izany. City Art ny anaran’ity toeram-pampirantiana sy fanaovana fampisehoana ity.
Araka ny fifanarahan’ny roa tonta, ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina no mandrindra ny fampiasana ny toerana sy manoka-baravarana ireo mpanakanto liana, te haneho ny talentany ao. Tontosaina isam-bolana ny hetsika ka maharitra tapa-bolana ny fampirantiana iray.
Nisantatra ny City Art, nanomboka omaly, àry ireo mpanakanto miisa 30 ao amin’ny Tanàna art gallery. Mpanao hosodoko sy mpikolo ny kanto araka endrika amam-bika izy ireo, izay samy manana sanganasa roa avy aranty eny an-toerana. Hita ho samy manana ny maha izy azy sy ny mampiavaka azy ny mpanakanto tsirairay.
Nambaran’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Lalatiana Andriatongarivo, fa manohana hatrany ireo hetsika manandratra ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy ny departemanta tantaniny ary miara-miasa amin’ny sehatra tsy miankina, toy ny La City. Izay indrindra no nahatonga izao fiaraha-miasa izao, izay irariana fa haharitra.
Maimaimpoana ny fitsidihana ny City Art, toerana ifamezivezen’ny olona maro ka hahatonga ny talentan’ireo mpanakanto hiantefa avy hatrany amin’ny isam-batan’olona. Tsy hifarana raha tsy ny 27 aogositra ny andiany voalohany amin’ny fampirantiana, eny an-toerana.